Blas Ruiz Grau. Kubvunzana nemunyori weMors saga | Zvazvino Zvinyorwa
Blas Ruiz Grau. Kubvunzana nemunyori weSaga yeMors
Blas Ruiz-Grau Ndiye mumwe wemienzaniso yakanakisa iripo yemunyori-anozviburitsa uyo anosvetukira kunzvimbo yenyika yekutsikisa achichengetedza kubudirira kwake. Muchidimbu, inoburitsa zita rayo rinotevera, Vakuru Vakauraya 2, chinyorwa chinotevera icho chaakaburitsa mu2019 pane akaipisisa psychopaths munhoroondo. Asi kubudirira kunozivikanwa ndekwake saga yeMors, izvo zvinoumba Kwete nhema, Hausi kuba y Haufe. Muizvi indavhiyu inotiudza zvishoma nezvese zvinhu. Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye mutsa kuti mundibatsire.
Alicante kubva ku84 akaberekerwa mu Rafael, Blas Ruiz Grau akazvinyora-nyora rake rekutanga bhuku, Chokwadi chinokusunungura, gore rakatevera rakauya kuenderera kwayo, Chiporofita chevatadzi, iyo yakanga iri kubudirira kukuru kwekutengesa. With Kryptos, zita rayo rechitatu, rakaiswa munzvimbo yechipiri yevanotengesa zvakanyanya uye muna 2017, na Mazuva manomwe ekufamba, yakawedzera kuvimbisa kuratidzira kwayo. With Ngaparege kuva nemunhu anobata chero chinhu!, rondedzero pamusoro pengano uye chokwadi chemapurisa uye nzira yekuongorora, yakamira sechiyero mukuferefetwa kwematsotsi.
BLAS RUIZ GRAU - KUSVIRA
BLAS RUIZ GRAU: Nezve iro bhuku rekutanga ndinofungidzira kana raive rimwe re Trotamusician kana of Asterix naObelix. Chero zvazvingava, semwana mudiki ndainakidzwa nekuverenga ma comic uye vhiki rega rega ndaitenga.
BRG: Ndakavhunduka chaizvo Mboro yekupedzisira. Ini ndinofunga yaive nguva yekutanga kuti ndibatanidze zvakanyanya ne (one mune ino kesi) hunhu hukuru. Ini ndaifunga kuti ndiyo yaive kiyi yekuita chiratidzo chekuverenga iwe.
AL: Munyori anodiwa kana vanyori? Unogona kusarudza kubva kumazera ese.
BRG: Izvozvi yave kundipengesa Michael Santiago. Handifungi kuti chero munhu anozviita saiye.
AL: Ndeipi poindi yakajairika kana hunhu hwenhoroondo dzako dzese uye iwe unofunga kuti wakashanduka sei kubva pazita rekutanga iro rawakazvitsikisa?
BRG: Ndinofunga ndakwanisa kuita zvandataura pamusoro, kuti vaverengi vanobatana neangu mavara uye vanzwe uye vararame zvavari. Ini zvakare ndinotarisira zvakanyanya magwaro uye handimhanye musoro wekutanga mune zvinobuda. Ndichine nyonganiso, asi musoro wangu unomhanya ndiri ini.
BRG: Kune muongorori Amaia salazarNaDolores Redondo.
BRG: Zvese silence izvo zvinogona.
BRG: Zvino ndizvozvo pavanondisiya.
AL: Mamwe mabhuku emhando aunoda?
BRG: Ini ndinofarira iyo nhoroondo yenhau.
BRG: Zvese zviri zviviri. Inguva yakaipa nguva dzose nekuda kwemamiriro asina kumboitika atiri kusangana nawo, asi isu vanyori tinofanirwa kuziva kuti, maererano nebasa, hatigone kunyunyuta nekuti zvimwe zvakawanda zviri kuverengwa izvozvi.
BRG: Kutaura chokwadi. Ini handidi kutaura kuti kune kuzadza, izvo hazvimbo, asi ichokwadi kuti panenge paine vanyori vakawanda kupfuura vaverengi. Pamusoro pazvose, mupfungwa yekuti vazhinji vanongoda kuverenga vanyori vavo uye vanoomerwa nekuvhurira vamwe vavasingazive. Izvo zvinogumbura iye munyori ari kutanga zvakawanda (ndinoziva, nekuti ini ndakapfuurawo nazvo).
BRG: Zviri kundiomera semunhu wese. Psychologically iyi ndeye bullshit, hapasisina. Kubasa handigone kunyunyuta nekuti ndakapetwa katatu basa rangu. Hongu zvirokwazvo, mumanoveli angu hauzomboona chero chinhu chine chekuita necoronavirus Kana chimwe chakafanana. Ini handinzwe sekunge kutaura nezvazvo mubhuku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Blas Ruiz Grau. Kubvunzana nemunyori weSaga yeMors
Pakati pehusiku Zuva